I-China GRH Guorui Hydraulics, umholi kuzingxenyekazi zomsebenzi wasemoyeni Umkhiqizi Nomhlinzeki | Guorui
I-GRH Guorui Hydraulics, umholi kuzingxenyekazi zomsebenzi wasemoyeni
Ipulatifomu yomsebenzi wasemoyeni (i-AWP) uhlobo lwemishini ekhethekile eyenzelwe futhi yakhiqizwa ukuhlangabezana nezidingo zokusebenza okuphezulu kakhulu. Ingaphakamisa opharetha, amathuluzi, izinto zokwakha, njll ngeplatifomu yomsebenzi iye endaweni ekhethiwe yokufakwa okuhlukahlukene, ukusebenza kwe-Maintenance, futhi inikeze isiqinisekiso sokuphepha kwabasebenza. Ipulatifomu yomsebenzi wasemoyeni inezinhlobo ezahlukahlukene zezinhlelo zokusebenza ezisezansi, futhi inezici zobuchwepheshe bemikhiqizo ejulile nenani eliphakeme elengeziwe. Ezansi nomfula ikakhulu kubandakanya ukwakhiwa, ukwakhiwa kwemikhumbi, ukukhiqizwa kwamabhanoyi, ukufakwa nokwakhiwa kwensimbi, ukuhlobisa isakhiwo nokuhlanza, ubunjiniyela bezempi, ukugcinwa kwempahla kanye nezinsiza, izinsiza zezindiza neziteshi kanye neminye imikhakha.
Emakethe yamazwe omhlaba, iNyakatho Melika, iNtshonalanga Yurophu kanye neJapane yibona abakhiqizi abakhulu bezinkundla zomsebenzi wasemoyeni. I-Terex ne-JLG e-United States, i-Sky jack eCanada, i-Haulotte eFrance, ne-Aichi eJapan zikhulu kakhulu ngesilinganiso, zibalwa phakathi kwabahlanu abahamba phambili emhlabeni. Ukuhlungwa komhlaba wonke kwe-AWP kuphezulu, futhi imikhiqizo yasekhaya iDingli neXingbang ithuthuka ngokushesha. Ngo-2018, uDingli wakleliswa endaweni yeshumi emhlabeni, kwathi uHunan Xingbang Heavy Industry waklelisana nge-19. Eminyakeni yamuva nje, iLingong, i-Xugong, i-Liugong, i-Zhonglian nezinye izinkampani eziningi nazo zikhuphule imizamo yazo ye-R & D kanye nokwandiswa kwemakethe, futhi zisendleleni yesibili yale mboni. Ngokuzayo, njengoba isilinganiso semakethe siqhubeka nokwanda, izinkampani eziningi zendabuko ezizothuthukisa nazo zizongena kule ndawo. Kunokuhlukahluka okukhulu emncintiswaneni phakathi kwemikhiqizo yasekhaya embonini.
Ukwakhiwa kwamapulatifomu omsebenzi wasemoyeni eChina sekudlule isikhathi, futhi imakethe yasekhaya ayiwazi kahle umkhakha. Amapulatifomu womsebenzi wasezindiza awasetshenziswa kabanzi. Inani elikhulu lomsebenzi wasemoyeni lisalawulwa yisikafula noma esikhundleni salo kufakelwe izifoloko. Ezimweni ezimbalwa, kungafakwa ipulatifomu ngaphezulu kukakhrayamu. Ibhokisi ukufeza inhloso yokusebenza okuphezulu kakhulu. Ngo-2018, inani lama-AWP eChina lalicishe libe amayunithi angama-95,000, okuyigebe elikhulu uma kuqhathaniswa namayunithi angama-600,000 e-United States kanye nama-300,000 amayunithi emazweni ayishumi aseYurophu.
Kusukela ngo-2013, i-AWP yasekhaya inesilinganiso sokukhula samakhemikhali sonyaka esilinganiselwa ku-45%, futhi isisesikhathini sokukhula ngesivinini esikhulu. Noma ngabe kungokweqoqo eliphelele, ukusungulwa komuntu ngamunye noma ukungena komkhiqizo, kuqhutshwa ukuphepha, umnotho nokusebenza kahle okuphezulu. Ngokuzayo, imakethe ye-AWP yasekhaya inesikhala sokukhula esiphindwe ka-5-10 ngokuzayo.
Njengomhlinzeki omuhle kakhulu wezingxenyekazi zomsebenzi wasemoyeni, iGuorui Hydraulics ibibambe iqhaza elijulile kulo mkhakha iminyaka engaphezu kwengu-20. Ifakwe amaphampu egiya, ama-hydraulic cycloid motors, amayunithi we-hydraulic power, kanye nama-valve wokulawula ama-hydraulic, ukuphela kwento ehlinzeka ngamasu ngokubambisana kwezingxenye ze-Terex hydraulic e-Asia. Uhla oluphelele lwemikhiqizo lunabakhiqizi basekhaya nabangaphandle bamapulatifomu womsebenzi wasemoyeni.
Imoto ye-hydraulic esetshenziswa kakhulu ku-AWP yimoto yamasondo esetshenziselwa ukushayela isondo. Ibiphethwe yimikhiqizo yakwamanye amazwe eminyakeni yokuqala. UGuorui wethule amathalente aphezulu ekhaya naphesheya, ngokuzimela athuthukise uchungechunge lwe-GWD, futhi athuthukisa idiski eligcwele imvamisa isilawuli se-hydraulic esivaliwe. Futhi iphampu yesandla sohlobo oluhlanganisiwe, ngemuva kokuqinisekiswa ngabakwa-OEMs basekhaya, manje seyethulwe ngokuphelele emakethe.
Ukuhlaziywa kokuhluleka okuvamile kwe-hydraulic ...
Ukuhlukaniswa kwama-valve wokubacindezela
Umehluko phakathi kwe-sys hydraulic evulekile ...
Usayizi wemakethe we-Trimellitic anhydride, global ...